FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY BRUXELLES GRIFFON - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Bruxelles Griffon
'Zao aka' Man 'ity. Izy dia Bruxelles Griffon 10-pon. Izy no manana ny volombava tsara indrindra hitanao. Tiany daholo! Ny sakaizany akaiky indrindra dia Shelby ilay Sinoa volon-tratra tsy voahosotra . '
Lisitry ny alika mifangaro griffon any Bruxelles
Ny Griffon dia alika kilalao matanjaka izay heverina ho toy ny Ewok avy amin'ny sarimihetsika Star Wars. Ny loha lehibe dia boribory miaraka amin'ny handriny ary misy fijanonana lalina. Fohy dia fohy ny vavam-borona, toa natosika hiverina. Fohy dia fohy ny orona mainty. Ny alika dia manana overbite miaraka amin'ny lela mihantona. Ny maso mainty dia mivelatra ary misongadina miaraka amin'ny volomaso mainty lava. Ny sofina dia avo lenta, na voajanahary na avela voajanahary. Ny sofina voajanahary dia entina semi-erect rehefa manongotra ny sofina dia tonga amin'ny teboka iray. Ny tongotra mahitsy mirehitra dia salantsalany ny halavany. Atao avo ny rambony ary apetaka amin'ny 1/3 ny halavany. Fanamarihana: tsy manara-dalàna ny fikolokoloana ny sofina na ny rambony amin'ny ankamaroan'ny Eropa. Misy karazany roa ny palitao, marokoroko sy malama. Ny palitao henjana dia matevina sy manja. Amin'ny palitao malama, antsoina koa hoe karazana Petit Brabancon, fohy ny volo, tery, manjelatra ary mahitsy. Ny palitao fohy dia mora kokoa ny manamboatra. Ny loko palitao dia misy mena (volontany mena miloko mainty kely amin'ny volombava sy saokany), belge (fifangaroan'ny mena-volontany sy mainty mazàna misy sarontava mainty sy volombava), mainty sy volontany (mainty misy marika mavo mena eo ambanin'ny saokany, ny tongotra , ambonin'ny maso tsirairay, ny sisin'ny sofina sy ny manodidina ny vent), ary mainty matevina.
Ny Griffon dia alika falifaly manan-tsaina miaraka amin'ny toetrany terery. Miaraka amin'ny toetra maha-izy azy dia mahatonga alika mpiara-miasa tsara izy io ary tsara amin'ny alika sy saka hafa. Tiavo, mahasarika, velona ary liana te hahafantatra ny olona rehetra. Ny Griffon dia tsy afaka mipetraka any ivelan'ny trano fiandrasana. Raha omenao ny sombin-databatra izy ireo dia mety ho lasa mpihinana tsy mahasolo na mifantina. Mety ho sarotra ny mamaky trano. Manao mpiambina tsara izy ireo ary azo ampianarina hanao fikafika. Noho ny fijerin'ny endrik'alika ity saika olombelona, ​​dia tsy nantsoina hoe 'tarehy gidro' fotsiny izy ireo, fa mora voatsabo toy ny tsy alika, fa olombelona kely . Izany dia miteraka zavatra antsoina Syndrome kely alika . Manomboka mino ilay alika fa izy no mpanapaka ny trano, ary milaza amin'ny olombelona AZY izay azony atao sy tsy azony atao. Rehefa mamela alika haka ny trano ny olombelona, ​​dia miteraka ambaratonga samihafa olan'ny fitondran-tena , ao anatin'izany, saingy tsy voafetra amin'ny, finiavana, mitaky, mibontsina, fiambenana , fanahiana fisarahana , mikitika ary manaikitra mihitsy aza. Mety hanjary tsy atokisana amin'ny ankizy izy ireo ary indraindray aza ny olon-dehibe. Tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana , ho lasa olona avo lenta, mora tezitra ary mora tohina izy ireo. TSY toetra Griffon ireo, fa ny fihetsika entin'ny tsy fisian'ny hentitra, matoky tena, tsy miovaova mpitarika fonosana , OMS manome fitsipika izy ireo dia tsy maintsy manaraka sy mametra hoe iza izy ireo ary tsy avela hanao miaraka amin'ny habetsahana sy karazana fanatanjahan-tena mety .
Hahavony: 7 - 8 santimetatra (18 - 20 cm)
Lanja: 6 - 12 pounds (2,5 - 5,5 kg)
Mora mikatso ny olana miserana, ny maso ary ny taovam-pisefoana. Mahatsapa ny hafanana. Tsy ny tohodrano mora mora indrindra matetika no mila faritra sesarianina.
Griffons dia alika tsara amin'ny fiainana an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany.
Ireo alika kely ireo dia mihetsika be ao anaty trano, na izany aza, toy ny alika rehetra dia mbola mila entina a mandeha isan'andro mba hahatanteraka ny toetran'izy ireo voalohany handeha.
Ankizy 1 - 3, salantsalany 2
mpiandry ondry alemanina afangaro amin'ny chow
Ny palitaon'ilay masiaka dia mitaky be dia be ny sain'ny olona, ​​na izany aza mety hohetezahana ny palitaon'alika alika. Ny Griffon dia nandatsaka volo kely fotsiny.
Misy karazany telo ny Griffon, ny Brussels Griffon, Belgian Griffon ary Petit Griffon. Ny Griffon Belzika dia manana palitao lava sy lava miaraka amin'ny sisiny manodidina ny tarehy. Ny Brussels Griffon dia manana palitao mpamosavy izay lava kokoa noho ny Belgian Griffon's. Ny Petit Brabancon dia manana palitao fohy sy malama. Ny Brussels Griffon dia naseho voalohany tamin'ny fampirantiana Brussels tamin'ny 1880. Ohatra iray voalohany amin'ny karazany dia aseho amin'ny Van Eyck, ilay mpanao hosodoko Flemish. Raha vao notazonin'ny mpamily fiarakaretsaka tao Bruxelles tamin'ny taonjato faha-17 mba hanala ireo tranom-bahiny ireo, ny Brussels Griffon dia nanjary mpiara-miasa iray noho ny toetrany mahasarika. Ny Petit Brabancon mifono malama dia azo inoana fa niampita Pug ra Fomba hafa anisan'izany ny Affenpinscher , English Toy Spaniel , Alika an-dalambe Belzika, Yorkshire Terrier SY Terrier Irlanda mety nandray anjara tamin'ny Griffons maoderina. Ny AKC dia tsy mahalala afa-tsy ny karazany fantatra amin'ny anarana hoe Brussels Griffon. Ny fenitra amerikaniny dia mamela ny karazan-loko rehetra, mainty amin'ny mena, ary koa ny karazany malama (Brabancon). Ny FCI kosa dia nifampizara azy ireo tamin'ny karazany telo: malama (Petit Brabancon), mena mena (Brussels Griffon) ary marokoroko hafa (Griffon Belza). Noho izany, any Eropa dia aseho misaraka izy ireo ary tsy misy firaisana eo anelanelan'ny karazany. Any Amerika, na dia misy aza ny masontsivana mitovy amin'izany, dia atambatra ho karazany iray misy loko sy karazana palitao izy ireo. Griffon Bruxelles izay niseho tamin'ny sarimihetsika 'As Good as it Gets.' Somary tsy fahita firy, Griffons dia mety ho sarotra be ny mahita azy.
Terrier, Brussels Griffon AKC Toy
Griffon Belzika APRI, CKC, FCI, NKC
Petit Brabancon APRI, CKC, FCI, NKC
Bruxelles Griffon ACA, ACR, AKC, ANKC, APRI, CKC, CKC, DRA, FCI, KCGB, NAPR, NKC, UKC
Mia the Brussels Griffon toy ny alika kely amin'ny 13 herinandro eo ambony fandriana
Ity i Taz, Griffon Bruxellois. Izy dia mainty hoditra sy mainty hoditra telo taona. Sary natolotry ny Sherway Griffons — ilay alika kely manana fihetsika LEHIBE!
Bella dia Petit Brabancon.
Briffs Griffon enim-bolana antsoina hoe Ygor van de stad van Haven Belzika Breed. An'i C. Aerts-Depre
Ouzie the Petit Brabancon lahy
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Griffon Belza
Sary griffon belza 1
Sary Griffon Belza 2
Sary griffon belza 3
terrazana amerikanina Staffordshire sy ny fifangaroan'ny laboratoara
fifangaroan'omby omby alika omby
mixer spaniel sy bichon frize mifangaro
laboratoara mavo basset hound mix
inona ny ra-pitbull orona manga
fifangaroana bulldog anglisy sy frantsay